Maxkamadda ICJ ayaa ku gacan seyrtay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya waxay tilmaamtay inay diyaar u tahay inay dagaal gasho si ay u difaacato dhulkeeda | Somalisan.com
Home Afsomali Maxkamadda ICJ ayaa ku gacan seyrtay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya...
Maxkamadda ICJ ayaa ku gacan seyrtay kiiska dacwadda badda ee Soomaaliya Kenya waxay tilmaamtay inay diyaar u tahay inay dagaal gasho si ay u difaacato dhulkeeda
Maxkamadda ugu sareysa ee Qaramada Midoobay ayaa si weyn u xukuntay Soomaaliya dacwadii mudada dheer ka taagneyd Kenya ee ku saabsaneyd soohdinta badda.
Kenya ayaa horay ugu eedeysay Maxkamadda Cadaaladda Adduunka inay eexday waxayna sheegtay inaysan aqbali doonin xukunka.
Kiiska ayaa quseeyay 38,000 sq mile (100,000 sq km) oo ah saddex xagal badweynta Hindiya oo loo malaynayo inay hodan ku tahay saliid iyo gaas.
Khilaafka ayaa udub dhexaad u ahaa khilaaf diblomaasiyadeed oo u dhaxeeyay deriska.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter -ka ayuu Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmaan Dubbe ku soo dhoweeyay xukunka, wuxuuna ugu hambalyeeyay Soomaalida dib u hanashada dhulkooda.
Afartankii sano ee la soo dhaafay, Kenya waxay sheegtay in xarriiqda bari ka xigta barta ay labada dal ku kulmaan xeebta ay ka dhigan tahay xadka badda.
Soomaaliya, si kastaba ha ahaatee, waxay maxkamadda ku doodday in soohdinta badda ee Badweynta Hindiya ay raacdo isla jihada soohdinta dhulka.
Guddigan oo ka kooban 14 garsoore oo fadhiya Hague ayaa sheegay in Kenya aysan caddeyn in Soomaaliya ay horay u oggolaatay xuduudkeeda ay sheegatay.
Taa bedelkeeda, waxay jiideen khad cusub oo laba u kala jaray aagga lagu muransan yahay.
Laakiin iyadoo Kenya ay diidan tahay inay aqoonsato awoodda ICJ ma cadda hadda waxa dhici doona. Maxkamaddu ma laha awood ay ku fuliso xukunnadeeda.
Soomaaliya ayaa sidoo kale ku doodday in Kenya ay ku xad gudubtay madax -bannaanideeda iyada oo ka hawlgasha dhul -badeedkeeda waxayna dalbatay magdhaw.
Garsoorayaashu, si kastaba ha ahaatee, way diideen dooddan.
Sannadkii 2009, labada dal waxay ku heshiiyeen heshiis is -afgarad ah, oo ay taageereen QM, in lagu xaliyo muranka soohdinta wadahadal.
Laakiin shan sano ka dib, Soomaaliya waxay sheegtay in wadahadaladu ay fashilmeen taas badalkeedana ay aadday ICJ. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warrantay in Soomaaliya ay ka carootay in Kenya ay shatiyada sahaminta ee aagga lagu muransan yahay ka iibisay laba waddan oo kala duwan sannadkii 2012 -kii.
Isagoo hadlaya ka hor intaan xukunka la ridin, ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa BBC-da u sheegay in dalkiisu “aaminsan yahay nidaamka ku saleysan xeerarka … waana sababta aan maxkamadda u nimid”.
Maxkamadda ayaa loo malaynayaa inay tahay dhexdhexaadiyaha ugu dambeeya ee murannada u dhexeeya ummadaha.
Haddii Kenya ay dheg jalaq u siiso xukunka, waxaa laga yaabaa in arrinta loo gudbiyo Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, sida ay ku warrantay BBC -da Anna Holligan oo fadhigeedu yahay Hague.
Ismariwaaga ayaa sii socda
Labada dal midna ma doonayn xukunkan, laakiin Soomaaliya ayaa ku faraxsan. Ka dib oo dhan, waxay heshay wax badan oo ay sheegatay oo Kenya ma aysan doonayn inay wax iska dhaafto.
Dhanka kale, wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa ii sheegtay inay u taagan tahay bayaankii toddobaadkii hore ee ahaa inaysan aqoonsanayn xukunka maxkamadda.
Su’aalaha hadda waxay ku xiran yihiin waxa xiga – yaase fulin kara xukunka?
Kenya waxay tilmaamtay inay diyaar u tahay inay dagaal gasho si ay u difaacato dhulkeeda – saldhig badeed oo u dhow aagga lagu muransan yahay ayaa dhowaan laga dhigay saldhig ciidan oo buuxa.
Soomaaliya ma laha ciidan badeed. Laakiin waxay leedahay saaxiibo.
Si kastaba ha ahaatee khilaafku ma aha ikhtiyaarka koowaad.
U fiirso wareeg kale oo wada hadal ah, ama isku dhac diblomaasiyadeed. Ama labadaba.
Kenya ayaa ku guuldareysatay inay ku dooddo in ICJ aysan ku lug yeelan maadaama heshiiska is -afgaradku uu yahay mid waajib ah.
Kadib bishii Maarso waxay diiday inay ka qeyb qaadato dhegeysiyada kadib markii ay codsatay in dib loo dhigo si loogu wargeliyo koox sharci oo cusub.
Waxa kale oo ay ka soo horjeesatay joogitaanka gudiga ICJ ee garsoore Soomaali ah, oo leh waa in uu dib isu noqdaa.
Toddobaadkii hore, dowladda Kenya ayaa ku tilmaamtay kiiska inuu yahay “hab garsoor oo khaldan”. Waxay intaas ku dartay in ay jirto “eex soo jireen ah” iyo in maxkamaddu ay tahay hab aan habboonayn oo lagu xaliyo khilaafka
Previous articleUgu danbeyn Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in Soomaaliya ay aqbashay go’aanka Maxkmadda ICJ ay maanta ka gaartay kiiska badda Soomaaliya iyo Kenya.
Next articleDUBAI — Shirkadda weyn ee dekedaha Dubai ee DP World
Ilhaan Cumar waxay weli la dagaallamaysaa Dimuqraadiyiinta Yuhuudda
Mudanayaasha baarlamaanka fadaraalka oo u doortay in uu noqdo madaxweynaha somaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo
Somalisan News - February 8, 2017